Isuzu Factory, vanotengesa - China Isuzu Manufacturers
Yakasimba uye yakasimba mota crankshaft yeIsuzu4JJ1
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Isuzu4JJ1
Kune crankshaft yakaoma machining, CNC lathes, CNC yemukati yekugaya michina, CNC lathes, uye zvimwe zvigadzirwa zvemberi zvichazoshandiswa zvakanyanya kuCNC kutendeuka, yekugaya yemukati, uye kutendeuka-braching yemagazini hombe uye yekubatanidza tsvimbo magazini kuti ubudirire kudzora deformation ye crankshaft machine. Zvekupedzisa crankshaft, CNC-inodzorwa crankshaft grinders ichazoshandiswa zvakanyanya kupedzisa magazini. Mhando iyi yekukuya muchina ichave yakashongedzwa otomatiki zvinodiwa yekukuya vhiri rine simba rekuyera mudziyo, yepakati furemu yekushandisa yekutevera mudziyo, otomatiki kuyera, otomatiki muripo mudziyo, otomatiki kukuya vhiri kupfeka, inowirirana mutsara kumhanya uye zvimwe zvinoshanda zvinodiwa kuti uve nechokwadi chekugadzikana kwekukuya mhando. Mamiriro azvino ezvinhu eepamusoro-chaiyo midziyo kutsamira pane zvinounzwa kunze kwenyika hazvitarisirwe kuchinja munguva pfupi.
Iyo kambani ine yepamusoro-soro yekugadzirisa michina, nzira dzekuyedza kwesainzi uye nepamusoro-soro vashandi. Main zvigadzirwa: yakakwira-chaiyo yekutsika kufa zvikamu; auto zvikamu; michina zvikamu uye otomatiki emagetsi zvikamu. Main michina: CNC yekuverenga kudzora lathe, hombe yekuverenga kudzora lathe, CNC machining centre, yemukati nekunze cylindrical kukuya, crankshaft kukuya, isina nzvimbo kugaya, honing, girazi kukuya ... nezvimwewo. Mumwe wako waunovimba naye!
Yakasimba mota crankshaft yeIsuzu4BD1
Yedu kambani mugadziri anoshanda mukugadzirwa, kutengesa uye dhizaini yezvakanaka zvinhu. Izvo zvigadzirwa zvinonyanya kushandira kugadzirwa kweforoma, kugadzira mota, kugadzira michina, kushandisa michina nemamwe maindasitiri, uye vakazvipira kupa vatengi hunyanzvi hwehunyanzvi, mhando yepamusoro uye nebasa rechokwadi. Zvigadzirwa zvekambani zvine mukurumbira wakanaka, uye network yekutengesa yakurumidza kufukidza nyika nenyika. Iyo ine nzvimbo muforoma uye Hardware chaiyo zvikamu zvemusika, uye yakahwina kurumbidzwa kubva kune vatengi.